किन आउँछ पाद ? यस्ता छन् पाद सम्बध्नी केही राेचक जानकारी - Purbeli News
किन आउँछ पाद ? यस्ता छन् पाद सम्बध्नी केही राेचक जानकारी
प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २१, २०७५ समय: ७:०९:५१
नाक तथा मुखबाट हावा लिँदा तथा छाड्दा कसैलाई मतलब हुँदैन । तर जब कसैले मलद्वारबाट हावा छोड्दछ तब यसले नजिकका मानिसलाई दिक्क पार्दछ र हावा छोड्नेलाई लज्जित बनाउँदछ ।
कहिलेकाहीँ अझ तिखो आवाज र नमिठो गन्ध सहित आउने यस्तो ग्यास समस्याको विषय नै बन्दछ । तर विज्ञहरुका अनुसार यसरी ग्यास छाड्नुमा लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन । यो त मानिसको पाचन प्रणाली स्वस्थ भएको संकेत हो ।
पेटभित्र पाचन क्रियाको दौरान ग्यास उत्पन्न हुन्छ । त्यो ग्यास कहिले मुखबाट त कहिले मलद्धारबाट बाहिर निस्किन्छ । मलद्धारबाट निस्किने ग्यास सधै दुर्गन्धित तथा ठूलो आवाज सहितको हुँदैन । शोध अनुसार एक जना व्यक्तिले दिनमा औषतमा १४ पटक पाद्दछ । अधिकांश पटक कुनै आवाज विना नै ग्यास उत्सर्जन हुन्छ । यसरी छाडिने ग्यासमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा बढि हुन्छ । यदि तपाइँले छाड्ने ग्यास तिखो गन्ध सहितको छ भने यसबाट बुझ्नुपर्छ की तपाइँले पर्याप्त फाइबर सहितको भोजन लिन पाउनुभएको छ र तपाइँको पेटमा पर्याप्त मात्रामा लाभदायक ब्याक्टेरिया छन् ।
तर ग्यास निकै दुर्गन्धित छ र सहनै नसक्ने तरिकाले गन्हाउँछ भने चाहीँ यसले राम्रो संकेत गर्दैन । यसको अर्थ हुन्छ तपाइँको पाचन तन्त्र अस्वस्थ छ । यसरी ग्यास बढि गन्हाउनुको अर्थ कारण तपाइँले यस्ता चिजहरु खाइरहनुभएको छ जसले उच्च मात्रामा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास उत्पन्न गरिरहेको छ ।शोधकर्ताका अनुसार खासगरी हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासका कारण मलद्वारबाट आउने ग्यासमा गन्ध आउँछ ।
शोधकर्ताका अनुसार केवल ग्यास छाड्नेलाई मात्र होइन ग्यास सुघ्नेलाई पनि फाइदा हुन्छ । पादमा मिसिएर आउने मिथेन ग्यास सुँघ्नाले मानिसमा विभिन्न खाले रोगको खतरा क मगर्दछ । डिमेन्सिया रोगका बिरामीलाई मिथेन ग्यासले निकै लाभ पूराउँदछ । त्यस्तै हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यासले पनि डिमेन्सियाका बिरामीको सरिरमा लाभदायक इन्जाइम उत्पादन गर्न सहयोग पूराउँछ ।
सिसेक्वा ताङनाम र लिम्बु समुदाय
अचम्मको संयोग, इटहरीमा श्रीमान-श्रीमतीको एकैदिन मृत्यु ( ७ तस्विरहरू )
उधारो २ सय ५० ले लियो ज्यान!
टाउको जोडिएका जुम्ल्याहाको सफल शल्यक्रिया
सेवानिवृत्तलाई दोहोरो सुविधा दिनुहुन्नः समिति
नेपालसहित दक्षिण एसियाका ६० लाख मानिसलाई बाढीको खतरा
सम्भावित महामारी नियन्त्रण गर्न काङ्ग्रेसकाे ध्यानाकर्षण
एक घण्टाको बिचमा श्रीमान र श्रीमतीको मृत्यु भएपछि…… !
आजको राशिफल / वि.सं. २०७६ श्रावण ०१ गते बुधबार
२०७६ श्रावण महिनाको मासिक राशिफल